Ụdị Iko - Clothes : Nkwalite (-55%)
BỤ OKWU Ụdị Iko Akpa aka - Wallets Ụdị Akpụkpọ ụkwụ & Clothes Jewelery - Anya
Ụlọ ahịa oyiri
Ị nwere mmasị na ndozi nke eserese, wallets, akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpa?
Karịa ka ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị!
ỊDỌ AKA NA NTỊ! Nkwalite⨯
naanị taa 49,00$
1h 35min. 25 okirikiri
ruo ọgwụgwụ nke nkwalite
Ị na-achọ inweta onyinye bara ụba na nke dị ukwuu nke ụdị ihe ndị kachasị ewu ewu na ndị na-emepụta ihe? Mgbe ị na-azụta ngwongwo, ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-enweta ọkwa kachasị mma, legit ma na-abịa site na isiokwu ndị nwere ike ịdabere na iwu? Ị nwere mmasị na ndozi nke eserese, wallets, akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpa? Karịa ka ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị!
N'okpuru Polish ndị ahịa nke ngwaahịa a ma ama na-enwe nnukwu ewu ewu. Isi ihe kpatara ya bụ eziokwu, na a pụrụ ịzụta ha ọbụna obere ọnụahịa ole na ole, ebe ọ bụ na e nwere ezigbo ngwaahịa ngwaahịa, ọ bụ nanị obere ma ọ bụ kpamkpam dị iche na nke mbụ. Ọnụ ahịa mara mma, ọnọdụ nnyefe doro anya, onyinye bara ọgaranya na ọrụ ọrụ - niile nke a na-enye site na ụlọ ahịa anyị na ejiji nke akpa, akpụkpọ ụkwụ, uwe na ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ.
N'ịmara ihe ndị dị na ahịa na atụmanya nke ndị na-azụ ahịa, naanị anyị na-enye ndị ọzọ ụdị ihe ejiji, iko ma ọ bụ nche, bụ ndị a nwalere n'onwe anyị ka anyị nwee ike ịchọta ha. Ihe a na-enye gụnyere ụdị ego dịka Ray Ban, Versace, Miu miu, Rolex, Emporio Armani na Bvlgari, Piaget ma ọ bụ Tiffany & Co..
Anya iko bụ otu n'ime ngwa ejiji kachasị mfe nke nwere ike ịgbanwe ihu gị, ihu, na nke na-agbanwe ihe osise nke onye ahụ. Ịzụta na ịgbanye iko igwe egwu, nke pụtara ịkwanyere ùgwù na ịdị mma, na-aghọwanye ndị na-ewu ewu. Nye ndị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ dị ka nnukwu dị ka ọtụtụ narị dollar, e nwere ọtụtụ Ray Ban na iko ihe atụ, yana Chrome Obi, DITA, Glassino ma ọ bụ Miu Miu. Naanị lelee ụlọ ahịa anyị ma họrọ ihe nlereanya kwesịrị ekwesị maka gị.
All iko a na-emepụta na anyị na-enye ngwaahịa ndị a na-arụ ọrụ nke ọma, na-eleba anya na obere nkọwa na iji ihe kacha mma. Ọ bụ ya mere, mgbe ịzụrụ ha, i nwere ike ijide n'aka na ọ bụghị naanị na ha ga-achọ mma, kama na ha agaghị enwe ike ịmalite ịmalite. Nke ahụ na-emetụta ihe ọ bụla, n'agbanyeghị ma ịchọrọ a Versace, mmasị kachasị mma, ileba anya na nkọwa kacha nta na iji ihe kachasị mma, ụdị Gucci, ụdị Super ma ọ bụ Thom Brown: ha niile bụ ndị otu àgwà.
Anyị na-akpọ gị òkù ịhụ onyinye zuru ezu ugbu a, na https://get2lux.cn/en/123 -glasses -glasses
Anyị na-akpọ gị òkù ịhụ onyinye zuru oke ugbu a, na
Onye ọ bụla modist jụrụ banyere akụkụ kachasị elelị anya nke ngwa n'ime ndị ikom na ndị inyom na-elekọta, na-enweghị oge, zaa na ha bụ wallets. Na n'ezie, ọ bụ ezie na anyị na-etinye uche na iyi akwa ejiji, ejiji ma ọ bụ ugogbe anya maka anwụ, ihe mkpuchi adịghị ka ihe dị mkpa. Ebe obere akpa anyị na-enyere aka gbanwee àgwà a site n'inye ụdị ejiji, nke a ma ama na nke oge a nke na-eju anya na atụmatụ ha na nke mbụ.
Ngwa ngwa akpa, n'agbanyeghị ihe niile, ọtụtụ ụdị dịka i nwere ike iche. Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu bụ oyiri nke Miu mi, onye na-emepụta ihe pụrụ iche na nhazi nke uwe ụmụ nwanyị na Louis Vuitton, bụ onye meriri ahịa ahụ maka ndị ikom. N'ezie, na nchịkọta anyị, ị ga-ahụkwa ụdị ndị ọzọ, gụnyere Chanel, Gucci na Christian Louboutin. Ụdị dịgasị iche iche na ọtụtụ akụkụ, mechiri ya ma ọ bụ ihe egwu a na-apụghị ịhụ anya, arụ ọrụ mara mma na arụmọrụ dị mma bụ njirimara ndị na-eji obere akpa anyị na-emepụta ma mee ka ha dị iche iche n'ahịa dum.
Anyị na-akpọ gị òkù ịlele ụlọ ahịa anyị ma lelee onyinye zuru oke: https://get2lux.cn/en/120-wallets
Akpa aka - Wallets
naanị taa 118,00$
Ụdị Akpụkpọ ụkwụ & Clothes
naanị taa 39,00$
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ bụ ngwaahịa ndị a na-erekarị na-eji dochie ngwaahịa mbụ, ma na-enwe àgwà yiri ya na ọdịdị yiri nke ahụ. Ndị ahịa nwere ekele maka ọdịdị ọdịdị na nkwekọrịta nke ịrụ ọrụ nakwa dị elu dị elu, nguzogide na ọtụtụ afọ nke iji akpụkpọ ụkwụ dị otú ahụ mee ihe. Ọ bụghị ihe ijuanya na Burberry replicas, Prada, Gucci, Hamis ma ọ bụ Chloe bụ ụdị na-ere ahịa na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nwere afọ ojuju dị otú ahụ site na izu ruo izu.
Anyị mepụtara onyinye bara ọgaranya ma buru ibu na-abịa site na ụdị ụdị ejiji na ndị a ma ama, karịsịa maka gị. Ị ga-ahụ ebe abụọ akpụkpọ ụkwụ LV abụọ, akpụkpọ ụkwụ Isabel Marant na Givenchy, mana nwekwara ụdị Gucci, Prada ma ọ bụ YSL. Ngwongwo kachasị ọhụrụ na nke kachasị mma, ileba anya na nkọwa kacha nta, nnukwu ihe onwunwe na nchịkọta bara ụba nke ụdị dị iche iche ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ịchọta akpụkpọ ụkwụ ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ, ị ga-ejikwa uwe ọ bụla. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ anyị na - ere - n'agbanyeghị ihe nlereanya ma ọ bụ onye mmepụtara ahọrọ - bụ nkwa na ị ga-enwe ọganihu ịga nke ọma, ịga ije na afọ ojuju na ịzụta.
Kedu otu ị ga-esi mata uwe ndị dị mma ka a na-eji eme ihe n'usoro gbasara ihe onwunwe? Ịzụta ihe ntinye na ntanetị n'Intanet, ọ dị mma na ngwa ngwa? Na akpatre, ọ bara uru ịzụrụ ihe ndị ọzọ kama ịbụ ndị mbụ, ọ bụ ezie na ọnụahịa ha nwere ike ịdịgasị iche ruo ọtụtụ narị zlotys? A na - aza ajụjụ ndị a site na ụlọ ahịa anyị dị ka uwe, nke anyị ji obi ụtọ kpọọ gị.
Ruo ọtụtụ afọ, ịzụta ihe eji ejiji abụghị uwe ma ọ bụ ihere; Ihe karịrị ọkara nke ndị mmadụ na-eyi ihe ndị ọzọ n'ihi na àgwà ndị dị otú ahụ yiri nke ha. Ihe oyiyi nke YLS, Alexander Mqueen, Emporio Armani na Kenzo dị na ụlọ ahịa anyị; anyị na-enwetakwa ọkwá dị elu site na Chloe, Louis Vuitton na Moschino. Ndị ọkachamara nke Gucci na uwe si n'aka Givenchy, nke a na-ahọrọ karịsịa maka ndị na-eto eto na nke oge a si n'obodo ukwu, dị oke mma.
Anyị na-agba gị ume ka ị mara ihe gbasara ụlọ ahịa ahụ, nke ị ga-ahụ na njikọ a https://get2lux.cn/en/115- ihe ọ bụla ihe ọ bụla
Ọnụ ndị si Chanel, olu si Diora, mgbaaka si n'aka Louis Vuitton? Ogologo oge gara aga, ọ bụ naanị ndị ole na ole a họọrọ bụ ndị nwere obere akpa akwa. Taa, ụdị ihe eji eme ihe site na cartier, ọtụtụ ma ọ bụ Piageta dị maka onye ọ bụla, na ọnụahịa ndị na-adịghị akpata isi ọwụwa.
Inweta nnweta na ọnụ ala dị ala bụ ihe ndị na-ekpebiri banyere nnukwu ihe ịga nke ọma na ụdị ihe eji eme ihe na-atọ ụtọ na Poland ugbu a. Ndị inyom na ndị ikom si n'akụkụ nile nke mba ahụ na-azụta ma na-eyi ha, n'agbanyeghị ọnọdụ mmadụ ma ọ bụ nkwụnye ego. Ihe dị iche iche nke onyinye na ịnye ọnụahịa na-enye onye ọ bụla aka ịhọrọ ụdị ọla ọhụụ nke ọ bụghị nanị na ha chọrọ, kama ọ pụkwara imeli ya. N'agbanyeghị eziokwu ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ jewelery site na Tiffany & Co oyiri collection, ma ọ bụ ihe nlereanya site na onye na-amachaghị maara ihe - ha niile nwere ike zụta na ụlọ ahịa anyị, na ahịa mara mma, yana nkwa nke ịga nke ọma na azụmahịa.
Ma echela okwu anyị na ya, naanị ileba ụlọ ahịa anyị anya na ihe ndị ọzọ eji eme ihe, dị ebe a https://get2lux.cn/en/121-jewellery Dịka akụkụ nke akwa na-etinye na nkwojiaka, a maara oge nlekere maka oge dịtụ mkpirikpi, nanị maka obere ihe karịrị otu narị afọ. Na mbụ, a na-eyi ha na akpa ego, na-agbanye agbụ ígwè. Taa, ngwaọrụ ndị a na-enweghị atụ na-enwe mmasị na-ewu ewu, yana mgbatị mgbaaka site na ndị a ma ama na ndị na-emepụta ihe. N'ime ha ị nwere ike ịmata ụlọ ọrụ ndị dị ka: Emporio Armani, U-ụgbọ mmiri, Rolex, ma Audemars Piguet ma ọ bụ cartier. Ụdị nke ndị nche ahụ na-efu ọbụna ọtụtụ puku dollar, bụ nke, mgbe ha tụgharịrị n'ime złotys, na-aghọ nnukwu ego. Ọ bụ ya mere na ọ bụghị ihe ijuanya na mmasị Ogwe osisi na-adọrọ mmasị na Rolex replicas nke ọma karịa nke mbụ, nke anaghị adị mfe na mba anyị. Ma ọ bụghị ịzụ ihe dị ọnụ ala karịa na-ekpughe gị ịme ihere na ịkwa emo maka iji ngwaahịa unoriginal? N'ezie, ọ bụghị! Mpempe akwụkwọ mgbagwoju anya site na U-ụgbọ mmiri ma ọ bụ TAG Heuer adịghị njọ karịa mmalite ma ọ bụ na ọpụrụiche, ma ịmata ihe abụọ ahụ bụ ihe na-agaghị ekwe omume. Ụdị ndị a kpọtụrụ aha, yana ọtụtụ ụdị nche ndị ọzọ.
Dịka akụkụ nke akwa na-etinye na nkwojiaka, a maara oge nlekere maka oge dịtụ mkpirikpi, nanị maka obere ihe karịrị otu narị afọ. Na mbụ, a na-eyi ha na akpa ego, na-agbanye agbụ ígwè. Taa, ngwaọrụ ndị a na-enweghị atụ na-enwe mmasị na-ewu ewu, yana mgbatị mgbaaka site na ndị a ma ama na ndị na-emepụta ihe.
N'ime ha ị nwere ike ịmata ụlọ ọrụ ndị dị ka: Emporio Armani, U-ụgbọ mmiri, Rolex, ma Audemars Piguet ma ọ bụ cartier. Ụdị nke ndị nche ahụ na-efu ọbụna ọtụtụ puku dollar, bụ nke, mgbe ha tụgharịrị n'ime złotys, na-aghọ nnukwu ego. Ọ bụ ya mere na ọ bụghị ihe ijuanya na mmasị Ogwe osisi na-adọrọ mmasị na Rolex replicas nke ọma karịa nke mbụ, nke anaghị adị mfe na mba anyị. Ma ọ bụghị ịzụ ihe dị ọnụ ala karịa na-ekpughe gị ịme ihere na ịkwa emo maka iji ngwaahịa unoriginal? N'ezie, ọ bụghị! Mpempe akwụkwọ mgbagwoju anya site na U-ụgbọ mmiri ma ọ bụ TAG Heuer adịghị njọ karịa mmalite ma ọ bụ na ọpụrụiche, ma ịmata ihe abụọ ahụ bụ ihe na-agaghị ekwe omume.
Ụdị ndị a kpọtụrụ aha, yana ọtụtụ ụdị nche ndị ọzọ.
naanị taa 169,00$
Oke weebụ a nwere naanị ozi na-abụghị nke ejiri ihe atụ. Ihe ọmụma dị na weebụsaịtị ahụ sitere na mmemme mmekọ, nke ọrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ. Onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ anaghị ere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ gbasaa n'ahịa ndị dị otú ahụ. Ekwesiri icheta na mmetụta nke ime ihe na-adabere na ihe ndị mmadụ na-eme na oge nkwadebe.